दुखद खबर : युएईमा १ सय ३ नेपालीले ज्या’न गुमाए ! - Nepal Insider
January 20, 2020 622
नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्यमध्ये एक मानिने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा बितेको सन २०१९ मा मात्रै १०३ नेपालीेले ज्या’न गुमाएका छन। ज्यान गुमाउनेहरुमा ९९ जना पुरुष र ४ जना महिला छन। कार्यस्थलदेखि दु’र्घटनालगायतमा परेर युएईमा एक वर्षको अवधिमा १०३ ले ज्या’न गुमा’एको युएईस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। केही दिनअघि मात्रै अबुधाबीमा भएको सवारी दु’र्घटनामा नेपाली परेका थिए। जसमा ३ को मृ’त्यु भएको थियो भने १६ जना घा’इते भएका छन्।
नेपाली दुतावास आबुधाबीका अनुसार, गत वर्ष दुर्घटनामा परेर मात्रै २३ नेपालीले ज्या’न गु’माएका छन्। १ महिलासहित ५७ जनाको प्राकृतिक कारणबाट मृ’त्यु’ भएको छं। यस्तै एक महिला र १७ जना पुरुषले आ’त्म’ह’त्या’ गरेको तथ्यांक छ। सन २०१८ मा युएईमा ज्या’न गुमाउने नेपालीको संख्या अझै बढी छ। युएईस्थित नेपाली दूतावासका ‘अनुसार, सन २०१८ मा ९ जना महिलासहित ९८ जना पुरुषले ज्यान गुमाएका थिए। सन २०१८ मा ३ महिला सहित ३० नेपालीले आ’त्म’ह’त्या’ गरेका थिए।
यस्तै गतवर्ष २ जना महिला र ३ जना पुरुषको ह’त्या भएको दूतावासले जनाएको छ। पारिवारिक विचलन, कार्यस्थलको तनावका कारण नेपालीले यूएईमा आ’त्म’ह’त्या गने गरेको दूतावासका सूचना अधिकारी भुवन ओझा बताउँछन। ओझाका अनुसार, तापक्रम, हृ’दय’घा’त, मादकपदार्थ सेवनलगायत कारणले पनि कतिपय नेपालीको ज्या’न गइरहेको छ।पछिल्ला केही वर्षयता युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाले खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउँदै आएका छन। एक तथ्यांकअनुसार, युएईमा मात्रै २ लाख ५० हजार नेपाली युवा श्रम खर्चिरहेका छन।
Prevकाठमाडौंका यी ५१ स्थानमा दायाँ मोड्न नि’षेध, १० ठाउँमा वान वे ! [ जानकारीको लागी सबैलाई शेयर गरौँ ]
Nextखेतको डिलमा फेला पर्‍यो ३ वर्ष अगाडि हराएको चन्दननाथ मन्दिरको मूर्ति
टिकटक बनाउन नपाएर बेप’त्ता भनिएकी सिमरन, यस्ता छन् उनका टिकटक (भिडियोसहित)